ငါ့ဘေးမှာ မင်းရှိရင် အပိုင်း (၇) – အပြာစာအုပ်များ
“ တော်…တော်ပြီ …အို့…ဟို့..ပြီးသွားလိမ့်မယ် ..တော်တော့..မဒီ…တော်တော့………”
ဦးထွန်းချုပ် တားပေမဲ့ ဒေါ်မဒီ က အရှိန်ရနေ သည် ..။ ရပ်လို့မရသေး ..။ လျာလေး က လိင်တန်ကို ပတ်ထိုးနေ သည် ..။ရစ်လှိမ့်နေ သည် ..။
အို…အား…အား….မဒီ….ရပ်…အို…..အား…..အား……ဦးထွန်းချုပ် မထိန်းနိုင်တော့ ..။ ဒေါ်မဒီ လဲ စုတ်တာရပ်ပြီး လိင်တန်ကို ပါးစပ်ထဲက ချွတ်လိုက် ပေမဲ့ မမှီတော့။သုတ်ရေများ..တဖျတ်ဖျတ် ပန်းထွက်ခါ ဒေါ်မဒီရဲ့ မျက်နှာပေါ် ပေကျံကုန် သည်။
ဒေါ်မဒီလဲ ဦးထွန်းချုပ် ရဲ့ လိင်တန်ကို အမျိုးမျိုး ဆွပေးပေမဲ့ ဒီညတော့ ဒီမျှသာ ဘဲ ဖြစ်သွား သည် ..။ဦးထွန်းချုပ် ပြန်မထောင်နိုင်တော့ ..။ ခဏကြာတော့ ဦးထွန်းချုပ် တခူးခူး နဲ့ ပက်လက်ကြီး အိပ်မောကျသွားလေ သည် ..။ ဒေါ်မဒီမှာတော့ ရာဂမီးတွေ တဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်နေပြီး..အိပ်မရ ..ငုတ်တုတ်ထထိုင်..မိမိပေါင်ကြား က ခုံးထနေသော မိန်းမအင်္ဂါကြီး ကို ဖိဖိပွတ်ခါ လိုလားတောင့်တစိတ်တွေ ပြင်းပြနေ သည်။
ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရေချိုးကန်ကြီး ထဲမှာ အလွန်တန်ဖိုးကြီးသော အမွှေးဆပ်ပြာရည်များ နဲ့ စိမ်နေ သည် ..။ တကိုယ်လုံး ဟိုကြားဒီကြားပါမကျန် မွှေးကြိုင်နေစေဖို့ ..။ ညကျရင် ဈန်ရမောင် လာပြီး သူမကို ချစ်တဲ့အခါ ဈန်ရ က ဟိုနေရာ ဒီနေရာတွေကို နမ်းခဲ့ရင် ဈန်ရ မွှေးနေစေဖို့ ..။ရေတ၀ချိုးပြီး ရေချိုးခန်းထဲက ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ကြီး ထဲ သူမ ရဲ့ အ၀တ်မဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာကို သေသေချာချာ ပြန် စစ်ဆေးနေမိ သည် ..။ ည က ဈန်ရ နဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ဆက်ဆံလိုက်လို့ ဘာတွေများ ပြောင်းလဲသွားပြီလဲ ဆိုပြီး ..။သူမ ရတနာရွှေဖုတ် ကတော့ နာကျင်ကျိန်းစပ်နေတုံးဘဲ ..။ နာလဲနာ..ကောင်းလဲကောင်းတာမို့ …နာကောင်းကြီးလို့ ပြောရမည် .။အထူးသဖြင့် သူမ တိတ်တခိုး ချစ်မိ..စွဲလန်းနေတဲ့ ဈန်ရမောင် လုပ်သွားခဲ့တာမို့ ကြည်နူးခြင်းအပြည့်နဲ့ ကျေနပ်မိနေတာ ..။ ထပ်ပြီးတောင် လုပ်လိုက်ချင်သေးတယ် ..။ သူ့ကို စွဲသွားရပြီ လေ။
ဒေါ်မဒီထွန်းချုပ် ရေကူးကန်ဘောင်မှာ ပလပ်စတစ် ပက်လက်ကုလားထိုင် နဲ့ ထိုင်နေ သည် ..။ညနေစောင်း နေေ၇ာင် ကြောင့် မဲနက်တဲ့ နေကာမျက်မှန်ကြီး တပ်ထား သည် ..။ အိမ်ဖေါ်တယောက် က သောက်စရာ ရှောက်ချိုသီးဖျော်ရည် ဖန်ခွက် သူမဘေးက ခုံလေးမှာ လာချထား သည် ..။ဒေါ်မဒီ ည က ခံစားမှုကြောင့် နေလို့မကောင်းဘူး ..။ စိတ် နေလို့မကောင်းတာ ..။စိတ်အာသာ မပြေခဲ့ရဘူး လေ ..။ မနက်စောစော ဦးထွန်းချုပ် ပြန်များ ထအုံးမလား သူမ ကြည့်သေး သည် ..။ဦးထွန်းချုပ် ၇ဲ့ လိင်တန် သည် ပျော့ပြီး သေးငယ်နေ သည် ..။ သူမ ဆွပေးပြီး တောင်မတ်လာအောင် လုပ်ပေမဲ့လဲ မထတော့ ပိုမို ခံစားမှုတွေ ပိုရ သည် ..။ ဘိုက်ဆာရင် ပြေး စားလိုက်လို့ရပေမဲ့ လီးဆာတာက ထင်သလောက် မလွယ်ဘူး ..။ ဒေါ်မဒီ ရဲ့ ဖွင့်ပြောလို့မရတဲ့ စိတ်ဝေဒနာ က ဆိုးဝါးလှ သည်။ဦးထွန်းချုပ် ကတော့ ဒါတွေ မသိ ..။ မနက်လင်းတာနဲ့ ကော်ဖီတခွက် ကမန်းကတန်း သောက်ပြီး သူ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆီ ထွက်သွားပြီ။
ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ဆယ်ကျော်သက်လေး တယောက်လို ရင်တွေ ခုံနေ သည် ..။ ဒီည ဈန်ရမောင် နဲ့ ထပ်တွေ့ရမှာ မို့ ..။ ညကျရင် တအိမ်လုံး သူနဲ့ဈန်ရ ဘဲ ရှိအောင် အိမ်ဖေါ်မနု နဲ့ ထမင်းချက် ဒေါ်ခင်မြင့် ကို နားရက်ပေးလိုက် သည် ..။ မနု နဲ့ဒေါ်ခင်မြင့် လဲ ၀မ်းသာအားရ သူတို့ ရွာပြန်သွား သည် ..။ ဒါကြောင့် ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရင်ခုံနေတာ ..။ ညကျရင် ဈန် နဲ့ တအိမ်လုံးမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေချင်တိုင်းနေလို့ ရပြီ။
ဈန်ရ အိမ်ခဏ ပြန် သည် ..။ အဖေ နဲ့ အမေ က ငါ့သား လဲ သီဟတို့ အိမ်မှာချည်းဘဲမို့ မတွေ့ရတာတောင် ကြာနေပြီ လို့ ပြော သည် ..။ အမေ က သူကြိုက်တဲ့ ဒန့်ဒလွန်သီး နဲ့ငါးခူ ဟင်း ချက်ထားတယ်..စားသွား ဆိုပြီး အတင်း စားခိုင်း သည် ..။ ညကျရင် အန်တီလေး နဲ့ အပီအပြင် ဆွဲကြရမှာမို့သူ ဘိုက်တင်းမနေချင် ..။ အမေ စိတ်ချမ်းသာအောင် စတိလောက် နဲနဲ ၀င်စားလိုက်ရ သည် ..။အဖေ ကတော့ ဦးထွန်းချုပ် ရဲ့ ကြီးထွားလာသော စီးပွားရေး နယ်ပယ် အကြောင်း သူကြားသိရတာတွေသူ့ကို ပြောပြနေ သည် ..။ ထမင်းစားအပြီး ပုဂံတွေကို သူ တာဝန်ယူပြီး ဆေးပေး နေတုံး ဖုန်းလာ သည်။သူ့ကရာတေးကလပ် က သူ့လက်ထောက်များ ဖြစ်သည့်မျိုးမောင်မောင် နဲ့ ခင်ချိုအုန်း သူ့ကို ကလပ်ကို လာနိုင်ရင် လာခဲ့ပါအုံးလို့ ခေါ်တာ ..။ သူလဲ ကလပ်ကို သူတို့ နှစ်ယောက်နဲ့ဘဲ လွှဲလွှဲထားနေခဲ့တာ ကြာပြီ ..။ ခင်ချိုအုန်းက ခါးစည်း အညိုများ ကို ဈန်ရ ကိုယ်တိုင် သင်ကြားပေးစေလို သည် လို့ အကြံပြု သည်။
မနက်ဖန်မနက် လာခဲ့မည် လို့ ဂတိပေးလိုက်သည် ..။ တကယ်တော့ အန်တီလေး ကို တညလုံး ဖြုတ်ပြီးချိန်မနက်ပိုင်း ကလပ်မှာ သင်နိုင်ပါ့မလား မသိဘူး ..။ သီဟ က လဲ သူ ဘယ်သွားသွား လိုက်စေချင်နေ သည် ..။ကြွေမ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး ရဲ့ ၇ွာကို လိုက်သွားတာ သူ နဲ့ လိုက်ခဲ့ဖို့ ပြောနေ သည် ..။ဈန်ရ အန်တီလေး အိမ်ကို ရောက်သွားတော့ ည ကိုးနာရီ ထိုးနေပြီ ။အန်တီလေး အိမ် မှာ အိမ်ဖေါ်ရော..ထမင်းချက်မိန်းမကြီးရော ဘယ်သူမှ ရှိမနေဘူး…။ ကြီးမားတဲ့ တိုက်ကြီး နဲ့ခြံကျယ်ကြီး မှာ အန်တီလေး ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် တယောက်ထဲ ရှိနေ သည် ..။ သူ ရောက်သွားတော့ ခြံတံခါး ဖွင့်ပေးမဲ့ လူတောင် မရှိ ..။ တံခါးဝ က ဆီးကြိုနေသော အန်တီလေး ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ကို တွေ့တွေ့ချင်း ဖက်နမ်း ပစ်လိုက်မိ သည် ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် သည် ဖြူဖွေးနုဖတ်နေ သည် ..။ အသက်၄၀ လို့ မထင်ရ။
“ ဈန်..ဘာစားမလဲ …”
ဈန်ရ က သူမရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖေါင်းဖေါင်းလေးတွေကို သူ့လက်ညှိုး နဲ့ ထိကပ်ပြလိုက် သည်။
“ ဒါ စားမယ် ..”
ခါးသိမ်သိမ်လေးဆွဲဖက်ပြီး စုတ်နမ်းပြန် သည် ..။ အနမ်းတွေ က စစချင်းမှာ သိမ်မွေ့နူးညံ့သလောက် တဖြေးဖြေး နဲ့ ကြမ်းလာသည် ..။ လျာတွေ ပါလာ သည် ..။ အကိုင်အတွယ်တွေ လဲ ကြမ်းလာ သည် ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ဖင်တုံးတွေ ကို သူ စစချင်း ပွတ်ကိုင်နေရာက ဖျစ်ညှစ် လာ သည် ..။ အားရပါးရ နယ် လာ သည် ..။ သူ့ခါးက ပုဆိုး ကို ချွတ်ချလိုက်ပြီး..ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ လက်တဖက် ကို သူ ဆွဲယူသည် ..။ သူ့လိင်တန်အပေါ်ကို တင်ပေးလိုက် သည် ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် လက်တွေ တုန်ရီနေသလိုဘဲ ..။ မရဲတရဲ နဲ့ သူ့လိင်တန်ကို ကိုင် သည် ။ ထိပ်ဖူးဒစ်လုံး ကို ပွတ်သပ်နေ သည်။
အနီးက ဆိုဖါအရှည်ကြီးပေါ်ကို လဲကျသွားကြ သည် ..။ အန်တီလေးရဲ့ တထပ်ထဲ ၀တ်ထားတဲ့ ဘလောက်စ် ကို ဖွင့်ချွတ်လိုက်ပြီး ထိုးထိုးထောင်ထောင် ပေါ်လာတဲ့ နို့ထွားထွားတွေ ကို သူ ကိုင်နယ်ရင်း နို့သီးခေါင်း နီနီလေး တဖက် ကို စို့လိုက် သည် ..။ သူ့လိင်ချောင်း ကို ကိုင်ဆုတ်ထားသော ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ လက်တွေ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဆုတ်ညှစ်လိုက်တာ သူ သိလိုက် သည် ။နို့သီးခေါင်း နီနီလေး တွေက မာတင်းပြီး ကြွထောင်နေကြ သည်။
ကာမရာဂစိတ် ထကြွရင် မာထောင်လာသည်လို့ဈန်ရ ကြားဘူး သည် ..။ နို့တွေ စို့နေရင်း အန်တီလေး ရဲ့ ထမိန် ကို ဆွဲချွတ်လိုက် သည် ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် သည် ဈန်ရ နဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ချစ်တင်းနှီးနှောတာ ဖြစ်ပေမဲ့ နဲနဲ ရှက်နေသလိုဘဲ ..။သူမပေါင်တွေကို စိလိုက် သည် ..။ ဈန်ရ ငုံ့ကြည့် သည် ..။ တြိဂံပုံ ဖေါင်းဖေါင်းမို့မို့နေရာလေး က အမွှေးအမျှင် မရှိရှင်းပြောင်နေ သည် ..။ အရင်တခါ ကြုံတုံးက ထိပ်ပိုင်းလေးမှာ အမွှေးမဲမဲစုစုလေး တွေ့သလိုဘဲ ..။ အန်တီလေးရှင်းပစ်လိုက်ပုံရ သည် ..။ ဈန်ရ လက်ဖ၀ါး အဲဒီနေရာကိုး. ရောက်သွား သည် ..။ အို ..စိုစိုရွှဲနေပါလား ..။ အန်တီလေး စိတ်တွေ တအားလာနေတာ သိလိုက်ရတော့ ဈန်ရ လဲ စိတ်တွေ ထသည်ထက် ပို ထ သွား ပြီး ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ ပေါင်တန်သွယ်သွယ်တွေကြားထဲကို ခေါင်းအပ်ခါ အရေတွေ စိုစိုရွှဲနေတဲ့ ပန်းပွင့်လှလှကြီး ကိုနမ်းရှုံ့ လေပြီ။
“ အို …ဈန်..ဈန် ….အာ….အ….ဟင်..ဟင်..ဟင် …”
ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ဈန့် နှာခေါင်း နဲ့ ထိုးပွတ်တာကြောင့် ဖင်ကြီးတွေ ဟိုပြေးလိုက် ဒီပြေးလိုက် တဆတ်ဆတ် ခါလူးနေရ သည် ..။ သူမအင်္ဂါစပ်ကို တအား နမ်းနေသော ဈန်ရ သည် ဖင်တုံးတွေကို သူ့လက်နှစ်ဖက် နဲ့ ဖမ်းဆုတ်ကိုင်ပြီး လျာနဲ့ အောက်ကနေ အထက် ပင့်ကော်ကာ ယက်လိုက် တော့ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် တကိုယ်လုံးတုန်ခါသွားရပြန် သည်။
“အိုး….ဟို …ဈန် …”
ဈန်ရ လျာကြီး က သူမ အကွဲကြောင်းထဲ အောက်ကနေ အထက်..အထက်ကနေအောက် စုံချီဆန်ချီ ဖိဖိ ယက်နေတော့ ထူးကဲလှတဲ့ အရသာထူး ကို ခံစားရင်း ဈန်ရ ခေါင်း က ဆံပင်တွေကို ဆွဲထားနေမိ၇သည်။
ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ ကိုယ် တုန်ခါသွားနေပြီး ..အိုး..ဈန်ရယ် ..အား…ဟင့်ဟင့် နဲ့ ညည်းလိုက် သည် ..။ ဈန်ရ ရဲ့လျာယက်သံတွေက တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ အိပ်ခန်းကြီးထဲမှာ ပြတ်ကနဲ ပြတ်ကနဲ မှန်မှန်လေးပေါ်ထွက်နေပြီ ..။ အသက်၄၀ ထိ အပျိုကြီးဘ၀ နဲ့နေခဲ့တာ နောင်တရမိသွား သည် ..။ သူမ သူငယ်ချင်းတွေကြွားသလိုတော့ ထုတ်မကြွားနိုင်ဘူး ဖြစ်နေသည် ..။ ဈန်ရ နဲ့ဖြစ်ပျက်နေတာတွေ ဘယ်သူမှ အသိခံလို့ မဖြစ်ဘူး..။ အကိုကြီးဦးထွန်းချုပ်သာ သိရင် မိုးမီးလောင်မှာ သေချာသည် ..။ သူက လူသိများတဲ့ ဘီလျံနာကြီး မဟုတ်လား ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် တူကြီးသီဟရဲ့ သူငယ်ချင်း နဲ့ ညိစွန်းတာ မိသားစုထဲ ဘယ်လို မှ အသိမခံရဲ။ဒီလိုဘဲ ကျိတ်ကျိတ်ပြီး တွေ့ကြရမှာဘဲ..။ ဈန်ရ ရဲ့လျာက သူမရတနာပန်းပွင့်ကြီးရဲ့ အတွင်းထဲထိ တိုးတိုး ၀င်လာ လို့ သူမ ဖင်တုံးတွေ ဆတ်ဆတ်ခါပြီး ရမ်းသွားရ သည်။
“ အား….အား….ဈန်ရယ် ..အန်တီလေး…မနေတတ်တော့ဘူး …”
ဈန်ရ က သူမ ဘာပြောပြော ဂရုမစိုက်ဘူး ..။ သူလုပ်ချင်တာတွေကိုဘဲ လုပ်နေ သည်။အရသာဖူးလို့ ခေါ်ကြတဲ့ အစိ ကိုများ..သူ့နှတ်ခမ်းကြီးနဲ့ သေသေချာချာ ငုံပြီး စုတ်ယူလိုက်တာ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ်အရှင်လပ်လပ် နတ်ပြည်ရောက်သွားရ သည် ..။လုံးဝကို ကျင်တက်ပြီး..ဆွေမျိုးမေ့သွားရ သည် ဆိုတာမျိုး ..။အို..အခုလဲ..သူ့လျာကို အရှည်လိုက် ထိပ်ချွန်ချွန် နဲ့ ပန်းပွင့်ကြီး အတွင်းထဲကို အတင်း ထိုးနေပြန် သည် ..။ ထိုးတာမှ အထဲမှာ မွှေချင်တာ ..။ဒါတွေက သူ့ကို စွဲစေတာလေးတွေ ပေါ့..။ မနေ့ည က သူ လုပ်သွားတာလေးတွေတနေ့လုံး ပြန်ပြန် သတိရတာမှ သူမဖါသာ ပြန်ပွတ်မိနေရတဲ့ အထိဘဲ ..။ ဈန်ရ ရဲ့ လျာတွေလဲ ယက်လွန်းလို့ထူပူလာနေပြီ။ရုတ်တရက် ယက်ပေးတာ ရပ်လိုက်လို့ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် သူမ မျက်စိတွေ စုံပိတ်ထားရာက ဖွင့်ကြည့်မိ သည်။
ဈန်ရ အသံက အမိန့်ပေးသလိုလဲ မဟုတ်ဘူး ..။ တိုးတိုးလေး ပြောတာ ..။ သူခိုင်းတာကို ချက်ချင်း လုပ်လိုက်မိသည်..။ ပက်လက်ကနေ မှောက်လိုက် သည်။
အို..။ ဖင်ကုန်းခိုင်းနေတာဘဲ ..။ လေးဘက်ကုန်းပေးလိုက်ချိန် ဈန်ရ က သူမ ခါးလေး ကို လက်နဲ့ဖိပြီး နှိမ့်ချလိုက်တော့ ဖင်ူးတောင်းထောင်တဲ့ ပုံစံ ဖြစ်သွားရ သည် ..။ အို…ရှက်သလို ခံစားရ သည် ..။ ပက်ပက်စက်စက်ကြီး ဖြစ်နေ သည် ..။ အဖုတ်ရော ပြ ထားသလိုကြီး ..။ ရှက်တယ်..ဈန်ရယ်…လို့ တိုးတိုးလေးပြောလိုက်မိ သည် ..။ မရှက်နဲ့..အန်တီလေး…ဈန့်ကို ချစ်လား ..လို့ သူ မေး တော့ ..ချစ်တယ်ချစ်တယ် ..လို့မျက်လုံးစုံမှိတ်ထားပြီး ဆယ်ကျော်သက် ကလေးမလေးတယောက်လိုဘဲ ပြောမိသည်။
“သိပ်လှတာဘဲ အန်တီလေး ရယ် ..“
ဈန်ရ သူမ ဖင်ပေါက်တွေ အဖုတ်တွေ ကို ကြည့်နေပုံရ သည် ..။
“အိုး…ရှက်တယ် ..ဈန် ..မကြည့်နဲ့…”
ဈန်ရ သည် ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ ဖင်ကားကားတောင့်တောင့်ကြီးတွေ ကို ကိုင်ဖမ်းပြီး ပြူးထွက်နေတဲ့ အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီး ကို ရှလွတ် ဆိုပြီး စုတ်ယူလိုက်ရာ..အို..အင်း..ဆိုပြီး ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် တုန်ခါသွားဆဲ လျာကြီးက အပြားလိုက်ကြီး အဖုတ်အကွဲအတိုင်း ယက်ပေးနေပြီ ..။ သိလိုက်တာက အဖုတ်တခုထဲကို ယက်နေတာ မဟုတ်ဘဲ ဖင်ပေါက်လေးကို ပါ ယက်ယက်သွားတာ ..။ အာ..ဈန် ဘာတွေ လျောက်လုပ်နေသလဲမသိဘူး..မရွံဘူးလား မသိဘူး ..။
“ဈန် ..မလုပ်နဲ့လေ..မရွံဘူးလား …”
“ အန်တီလေး ကို သိပ်ချစ်တော့ ရွံတာတွေဘာတွေ ကျနော် မသိဘူး..အန်တီလေး..ကောင်းစေချင်လို့ ..မရုန်းနဲ့..ခံကြည့်…”
အားဟား…ဈန်ရ သည် အဖုတ်ကိုတောင် ဆက်မယက်ဘဲ ဖင်ပေါက်လေး ကို လျာထိပ်နဲ့ ထိုးထိုးဆွနေသည် ..။အိုကွာ..မင်းလေး ကို စွဲအောင် လုပ်နေပြီ ..လူဆိုးလေး ..။ တကိုယ်လုံ တုန်ခါနေအောင် ဘဲ ..။ အိပ်ရာခင်းတွေနဲ့ ခေါင်းအုံးကို လက်နဲ့ ဆုတ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်ထားရ သည် ..။အီး..အီး..နဲ့ ညည်းငြူနေမိရ သည် ..။ အတော်လေးကြာအောင် သူ ဖင်ပေါက် နဲ့ အဖုတ်ကို ယက်လိုက်စုတ်လိုက် လုပ်ပြီး မှ..“ ချစ်ကြရအောင် ..” တဲ့ ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် က ပက်လက်ပြန်လှန်မယ် လုပ်တာ..ဈန်ရ က..“ ဒီအတိုင်းဘဲနေ…”လို့ ပြောသည် ..။
အိုး..သူ…သူ..ဖင်ကုန်းရက် ပုံစံ နဲ့ လုပ်မလို့ပါလား..။ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ဒီလိုပုံစံ နဲ့ လုပ်ကြတာ ကို သူမ ခိုးခိုးကြည့်ဘူးသော နိုင်ငံခြား အပြာရုပ်ရှင်တွေ မှာ တွေ့ဖူးခဲ့သည် ..။ အင်း..သူနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ အမျိုးမျိုး ရရတော့တာဘဲ ..။ဈန်ရ သည် သူမ အနောက်ဘက် ကနေ သူ့လိင်တန်ကို ထိုးသွင်း လေပြီ..။
“အား..ဈန်…ဈန် ..ဖြေးဖြေး …. ”
အေ၇တွေက ဗွက်ထနေတော့ လိင်တန်ကြီး က တင်းကျပ်နေပေမဲ့ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ အဖုတ်ကြီးထဲ စီးစီးပိုင်ပိုင်ကြီး ၀င်ရောက်လာ သည် ..။ အတွင်းသားနုနုအိအိလေးတွေကို လိင်တန်ကြီး ပွတ်တိုက်ခါ ၀င်လာလို့တကိုယ်လုံး က အကြောအချင်ပေါင်း တထောင် ဆိမ့်သွားရသည် ..။“အီး…..” လို့ ညည်းလိုက်မိ သည် ..။ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ မပြတ်လုပ်ခဲ့လို့ အမြဲသေးကျဉ်နေတဲ့ သူမ ခါးလေးကို
သူ့လက်နဲ့ ဆုတ်ကိုင်ပြီး သူ့အတန်ကြီး ကို ဆက်ပြီး ထိုးသွင်းနေ သည် ..။ ကျပ်တစ်နေတော့ အနောက်ကို ပြန်ဆုတ် ထုတ်ပြီး ပြန်ဖိသွင်း သည် ..။အားပါး ..အပျိုကြီး…အကြာကြီး ယောင်္ကျား နဲ့ ကင်းကင်း နေနေခဲ့သမျှအခုတော့ ဖင်ပူးတောင်းထောင်ပေးကာ အလုပ်ခံနေပြီ ..။ ဈန်ရ လိင်တန် တဆုံး သူမ အဖုတ်ထဲ အောင်းနေပြီ..။
ဈန်ရ ရဲ့ အတန်အထက်နားက အမွှေးတွေ တောင် ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ ဖင်အိအိတွေ ကို ထိကပ်နေ သည် ..။ တချက် ထိုးအထည့်သူ့တွဲလောင်းကျနေတဲ့ ဂွေးစိတွေ က သူမ အဖုတ် နားက ဆီးခုံနေရာ ကို ဖတ်ကနဲ လာထိလိုက်တာ သိလိုက် သည် ..။အိုး..ဈန်ရ တချက်ချင်း ဖြေးဖြေးလေး စလုပ်ပြီ ..။ အသွင်းအထုတ်တွေ က အရသာ ထူးလှ သည် ..။ သူ့လိင်တန်ချောင်း နဲ့ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ အဖုတ် က အတိအကျ အံကိုက် တင်းကျပ်နေ သည် ..။ သွင်းလိုက်တိုင်း နောက်ဆုတ်လိုက်တိုင်း..အီဆိမ့်တဲ့ အရသာထူး ကို ရရှိရ သည် ..။ အို..ကောင်းလိုက်တာ ဈန်ရယ် ..လို့စိတ်ထဲက ပြောမိ သည် ..။ ဈန်ရ သည် လဲ အလွန် ဖြူဖွေးတောင့်တင်းသော အန်တီလေး ကို ဖင်ပူးတောင်းထောင်တဲ့ပုံစံနဲ့ လုပ်နေရတာ အိပ်မက်မက်နေသလိုဘဲ..။ စိုင်ကော်လို့ ခြုံပေါ်ရောက်ရတာဘဲ မဟုတ်လား။
စိတ်တွေက ဖင်ပေါက်နီနီလေး ရော အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးရော ကို မြင်နေရလို့ ပိုပိုကြွထ လာရပြီး ထည့်နေတဲ့ အ၇ှိန်လဲ ပို မြန်လာ သည် ..။ အန်တီလေး လဲ ခေါင်းငုံ့ပြီး တအင်းအင်း ညည်းတာက လွဲလို့ဘာမှ နာတယ်..မခံနိုင်ဘူး..မပြောတာကြောင့် ဈန်ရ လဲ ခပ်သွက်သွက် ခပ်မြန်မြန် ထိုးဆောင့် ပါတော့ သည် ။အရေတွေ ရွှဲနေလို့ ဖွတ်ဖပ်..ဖွတ်ဖပ် အသံတွေ ဆီးချက်မှန်မှန် ပေါ်ထွက်လာသည် ..။ မြန်သထက် မြန်လာသည် ..။ ဆောင့်တာဖြစ်လာ သည် ..။ အန်တီလေး ကလဲ ဆောင့်ပေးတာ ခံနိုင်ပြီး မငြင်း ..။ သူ ဆောင့်ထည့်ကာ လုပ်ပေးနေပြီ။
ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် အားကောင်းမောင်းသန် ဈန်ရ ရဲ့ ဆောင့်ထည့်ပေးတာတွေ ကြိုက် သည် ..။ အောင့်တောင့်တောင့် အတွင်းက ခံစားရပေမဲ့ သူ့ကို မတားဆီးနိုင် ..။ သူထိုးဆောင့်ပေးတာကို မရပ်လိုက်စေချင်ဘူး ..။ ကောင်းလိုက်တာ ဈန်ရယ် …။မင်းလေး အားကြီးလှချည်လား ..။ မင်းဟာ ငါ့ရဲ့ လူစွမ်းကောင်းလေးပါဘဲ ..။ မင်းလေးဟာ.အန်တီလေး ရဲ့ ယောင်္ကျား..။ လုပ်ပေးတဲ့ ယောင်္ကျား ..။ ဆောင့်ပေးတဲ့ အရသာတွေ ပေးတဲ့ လင် ..။ လင်လေး ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် စိတ်ထဲက ရေရွတ်နေတဲ့ စကားများ ပါ ..။ ဖင်ပူးတောင်းထောင်ရက် နဲ့ဘဲ ဈန်ရ သည် ဆက် ပြီး တအားဆောင့်ဆောင့်ထည့် သည်။
သူအရမ်းကောင်းလွန်းပြီး ပြီးခါနီး ဖြစ်လာသောအခါ လိင်တန်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ဖြူဖွေးတဲ့ ဖင်တုန်းကြီးတွေ အပေါ်မှာသုတ်ရေတွေကို တဖတ်ဖတ် နဲ့ ပန်းထုတ်လိုက်ပါတော့ သည် ..။ နုတ်ကလဲ..တအားအား..အော်ညည်းလိုက်သည် ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် လဲ ဖင်ပူးတောင်းထောင်ရက်ကြီး နဲ့ သူ့ဖင်တုံးတွေ ရဲ့ အပေါ် သုတ်ရေ ပူနွေးနွေးတွေ ဖျန်းပက်လိုက်တဲ့ အတွေ့အကြုံ အသစ် ကို ထူးဆန်းစွာ ခံစားမိနေ သည်။
← ငါ့ဘေးမှာ မင်းရှိရင် အပိုင်း(၆)
ငါ့ဘေးမှာ မင်းရှိရင် အပိုင်း (၈) →